मेस्सी बिना पनि बार्सिलोनाको जित !
स्पेन, स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत शनिबार रातिका खेलमा दुई मड्रिडले बराबरी खेल्दा साविक विजेता बार्सिलोनाले जितेको छ । डर्बी भिडन्तमा स्पेनिस दुई पाउर हाउस एट्लेटिक मड्रिड र रियल मड्रिडले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् । एट्लेटिक मड्रिडको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बल पोजिसनका आधारमा रियल हाबी भएपनि गोल गरी...बाँकी
मलाई आँप मन पर्छ: हाजार्ड
E Naya Khabar Reporter २०७६ असोज १५ गते बुधवार | October 02, 2019
एजेन्सी, स्पेनिस घरेलु लिग ला लिगाको सातौं हप्ताका खेलहरु शुक्रबार राती बाट सुरु हुँदैछन्। यसै चरणको खेलमा एथ्लेटिको मड्रिड र रियल मड्रिड एक आप्समा भिड्दैछन। एट्लेटिको को घरेलु मैदानमा हुने खेलको लागि दुबै क्लव तिब्र तयारीमा छन्। मड्रिड डर्बी सबैको लागि बिशेष हुनेछन्। अझै रियलका खेलाडी इडेन हाजार्ड्को...बाँकी
जर्जिनाले खुलाइन् रोनाल्डोसँग विवाह नगर्नुको कारण !
E Naya Khabar Reporter २०७६ असोज १४ गते मंगलवार | October 01, 2019
एजेन्सी, १४ असोज । चर्चित मोडल जर्जिना रोड्रिग्वेजले प्रेमी तथा पोचुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग अहिलेसम्म विवाह नगर्नुको कारण बताएकि छिन् । मिडियासँगको ‘च्याट शो’का क्रममा २५ वर्षीय जर्जिनाले युभेन्टसका सुपरस्टार खेलाडी रोनाल्डोसँग विवाह नगर्नुको कारणबारे यस्तो खुलाइन् ।अहिले रोनाल्डो र जर्जिना एकसाथ बसिरहेका छन् र उनीहरूका चार...बाँकी
जिम्बाबेसग बदला लिने दाउमा नेपाल !
सिंगापुर नेपाल र जिम्बाबे विच सिंगापुरमा जारी त्रिकोणात्मक टि ट्वान्टी कृकेटमा आज नेपालले टेस्ट मान्यताप्राप्त रास्ट्र जिम्बाबेसग खेल्दैछ। यो त्रिकोणात्मक सिरिज डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलाइएको छ।जसमा ग्रुपमा सर्वाधिक अंक ल्याउने दुई टिमविच फाइनल खेलाइनेछ।अहिलेसम्म सबै टिमको समान ३ अंक भए पनि नेट रन रेटमा अगाडि रहेर...बाँकी
मिडियाले धनीका अपराध दबाउँछन्, गरीबका अपराध उचाल्छन्ः कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स विश्वविख्यात चिन्तक तथा दार्श्निक हुन्। उनले समकालीन समाजलाई टाउकाले टेकेको समाजको संज्ञा दिए। समाजमा एउटा सशक्त ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ उनकै विचारबाट प्रेरित भएको मानिन्छ।कार्ल मार्क्स एक असल चिन्तक मात्र थिएनन्, एक सामाजिक चिन्तक र भावुक स्वाभावका व्यक्ति पनि थिए। संसारको भलाइमा उनका विचारहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको मानिन्छ।...बाँकी
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले दिए दशैंको शुभकामना
सिड्नी । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले हिन्दूहरुको महान चाड बडादशैंको शुभकामना दिएका छन् । आइतबार घटस्थापनाको दिन शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोरिसनले सबै हिन्दुहरुलाई दशैंको नवरात्रमा हर्षोल्लास र शक्ति अझ बढोस् भन्ने कामना गरेका हुन । दशैंको नवरात्रिले सबैलाई एकसूत्रमा बाँधिराखेको अष्ट्रेलियाको बहुसँस्कृतिको याद आउने उनले उल्लेख...बाँकी